Hashcat 6.0.0 na-abịa na 51 algorithms ọhụrụ na ndị ọzọ | Site na Linux
Newdị ọhụrụ nke Hapụla Hashcat 6.0.0 na n'ime ya na-egosipụta interface ọhụrụ, API ọhụrụ, nkwado maka CUDA na ndị ọzọ. Maka ndị na-amaghị Hascat, ha kwesịrị ịma na nke a bụ sọftụwia na-enye ohere iji weghachite okwuntughe site na akaghị.
Hashcat bụ nke mbụ na-achịkwa usoro GPGPU dụwa na adịkwa dị maka Linux, OSX na Windows na enweghị ọnụahịa.
Ọ na-abịa na 2 dị iche iche.
Usoro ka anyị were eriri hash ma jiri ya tụnyere ndepụta edepụtara nke ụkpụrụ site na iji eri ma mezuo ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na nhazi ihe eserese maka nhazi nhazi.
Enweghị ọdịiche dị iche iche mgbe ị na-enyefe Hashcat iwu n'ihi na na-eji usoro kachasị mma iji kpochapụ okwuntughe, ma ọ bụ CPU ma ọ bụ GPU, dabere na ihe ọkwọ ụgbọ ala ịwụnye ma ọ bụ.
Hashcat dị oke ọsọ ma na-agbanwe agbanwe: onye edemede mere ya n ’uzo nke ka ikwe ka egwu na-ekesa. Ana m akwado Hashcat n'elu Pyrit maka mgbanwe ya.
Mgbapu na-akwado ụdị ọgụ ise ma na-akwado ihe karịrị 300 algorithms okwuntughe hashes kachasị. Nhọrọ nghazi enwere ike ijikọta ya site na iji akụrụngwa ngụkọta ihe niile dị na sistemụ ahụ, gụnyere iji ntuziaka vector sitere na CPU, GPU, na ngwanrọ ngwaike ndị ọzọ na-akwado OpenCL ma ọ bụ CUDA.
N'ime ụdị ọgụ a na-akwado, nke kachasị pụta ìhè bụ:
Mwakpo dabeere na akwụkwọ ọkọwa okwu
Arụ ike ọgụ / nkpuchi
Ngwakọ ngwakọ + Nkpuchi
Nkpakọ nkpuchi + dict
Iwu dabeere agha
Lever ikpe ọgụ
Ndị a bụkwa ole na ole. Hashcat na-akwado ọtụtụ algọridim iji belata hashes. Enwere ike ịmepụta netwọk nhọrọ ekesara. A na-ekesa koodu oru ngo ahụ n'okpuru ikikere MIT.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Hashcat 6.0.0?
1.1 Etu esi etinye Hashcat na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Hashcat 6.0.0?
Na ụdị ọhụrụ a, ọhụụ ọhụrụ iji jikọọ plugins pụta ìhè Nke ahụ na-enye ya ohere ike modular hashing ụdịdị, API ọhụrụ backend mgbakọ na iji compute backends ọzọ karịa OpenCL.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na nsụgharị ọhụrụ bụ nkwado dị mma maka CUDA na ọnọdụ GPU emulation, nke na-enye gị ohere iji koodu kọmputa isi (OpenCL) na CPU.
Arụ ọrụ nke ọtụtụ algọridim abawanyeIji maa atụ, bcrypt na 45.58%, NTLM na 13.70%, WPA / WPA2 na 13.35%, WinZip na 119.43%.
Na mgbakwunye na sistemụ na-akpaghị aka, na-eburu n'uche ihe ndị dịnụ, agbasawanye yana yana nchekwa GPU na njikwa eri.
Anyị enweghị ike ịhapụ algorithms ọhụrụ agbakwunyere, nke dị na nsụgharị ọhụrụ 51 a gbakwunyere:
Gam akporo ndabere
Blockchain, Obere akpa m, Paswọdu nke abụọ (SHA256)
Obere akpa Electrum (Nnu-ụdị 3-5)
Kerberos 5 Pre-Auth ụdị 17 (AES128-CTS-HMAC-SHA1-96)
Kerberos 5 Pre-Auth ụdị 18 (AES256-CTS-HMAC-SHA1-96)
Kerberos 5 TGS-REP ụdị nke 17 (AES128-CTS-HMAC-SHA1-96)
Kerberos 5 TGS-REP ụdị nke 18 (AES256-CTS-HMAC-SHA1-96)
MultiBit Omuma .key (MD5)
MultiBit HD (ederede)
Mepee Akwụkwọ Akwụkwọ (ODF) 1.1 (SHA-1, Blowfish)
Mepee Akwụkwọ Akwụkwọ (ODF) 1.2 (SHA-256, AES)
Njikwa Transportgbọ njem Oracle (SHA256)
PKZIP Archive izo ya ezo
QNX / wdg / onyinyo (MD5)
QNX / wdg / onyinyo (SHA256)
QNX / wdg / onyinyo (SHA512)
Uhie 389-DS LDAP (PBKDF2-HMAC-SHA256)
Naa na Rails zuru ike-Nyocha
Orion nke SolarWinds
Telecode Desktọpụ App Telegram (PBKDF2-HMAC-SHA1)
md5 ($ salt.sha1 ($ nnu. $ ngafe))
md5 (sha1 ($ ngafe) .md5 ($ ngafe) .sha1 ($ ngafe))
md5 (sha1 ($ nnu) .md5 ($ ngafe))
sha1 (md5 (md5 ($ ngafe)))
sha1 (md5 ($ ngafe. $ nnu))
sha1 (md5 ($ ngafe). $ nnu)
sha1 ($ nnu1. $ ngafe. $ salt2)
sha256 (md5 ($ ngafe))
sha256 ($ nnu. $ ngafe. $ nnu)
sha256 (sha256_bin ($ ngafe))
sha256 (sha256 ($ ngafe). $ nnu)
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa nke ụdị ọhụrụ ahụ na nkwupụta ahụ. Njikọ bụ nke a.
Etu esi etinye Hashcat na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụụ aHa nwere ike inweta koodu isi maka mkpokọta ha ma ọ bụ ngwungwu ọnụọgụ abụọ sitere na ha ukara Web Site.
Ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịchọta ngwugwu n'ime ọtụtụ Linux nkesa.
Iji mee nke a, naanị ị ga-achọ ngwugwu ahụ na njikwa ngwugwu gị ma mechaa, rụọ nwụnye.
Iji maa atụ, na Debian, Ubuntu na nkesa e nwetara anyị nwere ike ịwụnye ngwugwu site na ịme:
Ma ọ bụ na Arch Linux na nkwekọrịta na:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Hashcat 6.0.0 na-abịa na 51 algorithms ọhụrụ na ndị ọzọ
Nebula Eserese ihe mepere emepe bu DBMS